Google Ads Audit : नि: शुल्क गुगल विज्ञापन विश्लेषण पाउनुहोस्
ads अभियानको अन्तिम ड्रपलाई Clever Google Ads Audit
थोरैका लागि तपाईंको Google Ads अभियानको प्रदर्शन बढाउनुहोस्।
अब नि: शुल्क मेरो Google Ads अभियान अडिट गर्नुहोस्
तपाईको Google Ads अभियानहरूलाई मात्र एक सेकेन्डमा Google Ads Rate्कन गर्नुहोस्।
आँखा झिम्काउँदा। Clever अडिट तपाईंको सक्रिय Google Ads अभियानहरू ग्रेड गर्दछ। अब जब तपाइँसँग एक सुरूवात विन्दु छ, एक उद्देश्य सेट गर्नुहोस्।
तपाईं आवश्यक जानकारी। र यो कसरी प्रयोग गर्ने।
Clever लेखा Clever उपयोगी Google Ads सुझावहरू र सिफारिसहरू मार्फत तपाईंको Google Ads अभियान प्रदर्शन अनुकूलन गर्न सुधार सुझाव दिन्छ। यी सुझावहरू तपाईंको प्रदर्शनमा उनीहरूको सम्भावित प्रभावको आधारमा व्यवस्थित गरिएको छ।
एक ट्यापमा सुधार लागू हुन्छ।
Clever अडिट विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको छ ताकि तपाईले व्यक्तिगत रूपमा सुझावहरू लागू गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईले चासो लिनुहुन्छ। केवल तपाईले चाहानु हुने चीजहरू लागू गर्नुहोस्। एक क्लिकमा
आफ्नो अभियान सुधार। नयाँ लक्ष्य सेट गर्नुहोस्।
तपाईंको Google Ads अभियानहरूमा एक झलक हेर्नुहोस् र अब कुन Clever लेखा परीक्षण सल्लाहले तपाईंको प्रदर्शन सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। जबसम्म तपाईं आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नुहुन्न।
तपाईको Google Ads अभियानहरूलाई जहाँ पनि अनुकूलन गर्नुहोस्।
Clever , वा समुद्र तटमा चलाखीकरण अडिट प्रयोग गर्नुहोस्। यो Google Ads विश्लेषण मोबाइल उपकरण र ट्याब्लेटमा राम्रो प्रदर्शन गर्न डिजाइन गरिएको हो। अब तपाइँ केवल आफ्नो औंलाको साथ Google Ads प्रदर्शन सुधार गर्न सक्नुहुन्छ।
आफ्नो अभियान स्केल र आफ्नो लाभ बढ्न।
एकचोटि तपाईको अधिकतम Google Ads अभियानको प्रदर्शनमा पुग्नु भएपछि यो समय मापन गर्ने, बढाउने र नयाँ दर्शकहरूमा पुग्न बढी अभियानहरू सिर्जना गर्ने समय हो। Clever लेखा Clever साथ सबै नियन्त्रणमा।
"यो Google Ads Audit उपकरण बुझ्न र प्रयोग गर्न सजिलो छ। साथै, म परिवर्तनहरू सिधै ड्यासबोर्डबाट लागू गर्न सक्दछु जसले मलाई धेरै घण्टा कार्यहरू बचत गर्दछ। यसले मेरो ROAS लाई द्रुत रूपमा सुधार गर्‍यो!"
"मेरो शहरमा एउटा सानो कपडाको कारोबार छ, र मेरो Google Ads बिक्री उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ किनकि म तिनीहरूलाई Clever Ads साथ अनुकूलन गर्छु। अब मलाई थाहा छ मेरो Google Ads रणनीतिमा के काम गर्दैन र म सजिलैसँग कार्य गर्न सक्छु।"
"Clever Ads तुरून्त र नि: शुल्क मेरो Google Ads अभियानहरू विश्लेषण गर्‍यो। मलाई सबैभन्दा मनपर्ने कुरा के हो जुन म सजिलैसँग निर्धारण गर्न सक्दछु कि कुन विज्ञापन अधिक लाभदायक हो, यसले मलाई मेरो आयको प्रबन्धन गर्न मद्दत गर्दछ।"
तपाईंको Google Ads अभियानहरू अनुकूलन गर्न सुरू गर्नुहोस्
अब एक मुफ्त अडिट प्राप्त
हामी तपाईंको डाटा सुरक्षा ख्याल। जाँच हाम्रो गोपनीयता नीति.
Clever Ads लेखा परीक्षा बारे अधिक
उपकरणको बारेमा बढि जान्नुहोस् जुन तपाईंलाई तपाईंको Google Ads अभियानहरू निचोर्न मद्दत गर्दछ
सुविधा र लाभ
Clever Ads द्वारा डिजाइन गरिएको नव Google Ads Audit Clever Ads तपाईं कहाँ खडा हुनुहुन्छ र अत्यधिक अप्टिमाइज गरिएको Google विज्ञापन अभियानबाट तपाईं कत्तिको टाढा हुनुहुन्छ देखाउँदछ। हामी तुरून्तै तपाईंको अभियानको एक पूर्ण गुगल विज्ञापन विश्लेषण प्रदर्शन गर्नेछौं, र तपाईंलाई राम्रो परिणामहरू पाउनको लागि के सुधार गर्नुपर्नेछ भनेर हामी तपाईंलाई बताउनेछौं।
समय र पैसा बचत
Clever Ads अडिटको उद्देश्य भनेको तपाईंलाई पैसा बचत गर्न मद्दत गर्नु हो जब तपाईं केहि खोजशब्दहरूमा धेरै खर्च गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईंको लक्ष्यलाई अनुकूलित गरिएको छैन, तपाईंको गुणवत्ता स्कोर राम्रो छैन, वा तपाईंको रूपान्तरण ट्र्याकिंग अन्य अन्य मुद्दाहरूको माझमा काम गरिरहेको छैन।
यसले तपाईंलाई अवसरहरू इंगित गर्न र नयाँ उच्च-रूपान्तरण कुञ्जी शब्दहरू थप्न, तपाईंको प्लेसमेन्टहरू सुधार गर्न, नयाँ अभियान प्रकारहरू सिर्जना गर्न, वा अझ विस्तारहरूको साथ तपाईंको ads पूर्ण गर्न पनि मद्दत गर्दछ। ती राम्रो परिणामहरू पाउन तपाईंको अभियान र विज्ञापन समूहहरूको समीक्षा गर्न समयको बर्बाद गर्न रोक्नुहोस्। एक लक्ष्य सेट गर्नुहोस् र हामी तपाइँलाई त्यहाँ कसरी पुग्ने भनेर बताउनेछौं।
बस एक क्लिक नेतृत्व लिन
हाम्रो Google Ads Audit ले तपाईंलाई केवल प्रत्येक क्लिक सुझावमा स्वचालित रूपमा लागू गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं बोलपत्रहरू बढाउन र घटाउन, नयाँ अभियानहरू, विज्ञापन र विज्ञापन विस्तारहरू सिर्जना गर्न, र तपाईंको लक्ष्य अपडेट गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। सबै गुगल विज्ञापन ईन्टरफेस प्रवेश नगरीकन, सीधा हाम्रो Google Ads Audit ड्यासबोर्डबाट।
Clever Ads अडिटबाट कसरी अधिक प्रयोग गर्ने
हाम्रो Google Ads विश्लेषण मात्र तपाईंको नयाँ विज्ञापन साथी हुन सक्छ। यो Google Ads अप्टिमाइजेसन उपकरण तपाईको जेबमा आफूसँग लिनुहोस् ताकि तपाईका अभियानहरू सधैं नियन्त्रणमा छन्। जस्तो तपाईंलाई थाहा होला, Google Ads अप्टिमाइजेसन एक पटकको काम होइन, तपाईंले यसको वरिपरि दिनचर्या बनाउनुपर्नेछ र तपाईंको अभियानको प्रदर्शनमा सधैं नजर राख्नु पर्छ। गुगलले एक महिनामा कम्तिमा एक वा दुई पटक Google Ads अप्टिमाइजेसन प्रदर्शन गर्न सिफारिस गर्दछ।
मासिक अनुकूलन पर्छ-के
हाम्रो शक्तिशाली Google Ads Audit साथ तपाईले त्यसो गर्न बिर्सनु हुँदैन। हामी तपाईंलाई गुगल विज्ञापन विश्लेषण समय समयमै प्रदर्शन गर्न सम्झाउनेछौं, त्यसैले तपाईंले गर्नु भनेको सबै प्लेटफर्ममा प्रवेश गर्नु हो र एक क्लिकमा नयाँ गुगल विज्ञापन विश्लेषण प्रदर्शन गर्नुपर्दछ। त्यसोभए तपाईंले गुगल विज्ञापन सुझावहरू र सुझावहरूको पूर्ण सूची पाउनुहुनेछ उनीहरूको अभियानहरूमा उनीहरूको सम्भावित प्रभावको आधारमा। हामी तपाईंलाई हाई-इफेक्टिप सुझावहरू समीक्षा गर्न सिफारिस गर्छौं, र त्यसपछि एकचोटि तपाईंले आफूले मनपराउनुभए पछि मध्यम र कम प्रभाव हुनेहरूका लागि जानुहोस्।
प्रत्येक टिप कार्डमा, तपाईले यसको बारेमा विस्तारित जानकारीको साथ एक सिफारिस गरिएको सिफारिस पाउनुहुनेछ ताकि तपाईं यस विषयको बारेमा बढी सिक्दै गर्दा आफ्ना अभियानहरूलाई अनुकूलित गर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई Google Ads विज्ञ बन्नको लागि मार्गदर्शन गर्न चाहन्छौं। धेरै सुझावहरू प्रयोग गर्नका लागि तयार छन् जसको मतलब हो कि तपाईं तिनीहरूलाई एक बटन क्लिक गरेर लागू गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
अर्को पटक जब तपाई Google Ads Audit गर्नुहुन्छ तपाईसँग नयाँ अभियानहरु हुने छैन तपाईको अभियानहरु लाई सुधार्न, तर तपाईले अघिल्लो अडिटको तुलनामा तपाईको प्रगति पनि जाँच गर्न सक्नुहुनेछ ताकि तपाईलाई लागु प्रभावको बारे जानकारी छ। तपाइँको अभियान मा थियो।
तपाईंको Google Ads अभियान अप्टिमाइज हुन समय र धैर्य लिन्छ, तर होइन यदि तपाईंसँग यो Google Ads Audit अपराधमा तपाईंको पार्टनरको रूपमा छ। समय भनेको पैसा हो - त्यसकारण हामी तपाईंलाई तपाईंको समयको मान बढाउनका साथै प्रत्येक विज्ञापन डलरमा खर्च गरेको फिर्ताको लागि मद्दत गर्दछौं।
किन Clever Ads अडिट प्रयोग गर्ने?
Clever Ads हामी गर्व गर्छौं प्रीमियर गुगल पार्टनरहरू, त्यसैले तपाईं विश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ कि सम्पूर्ण प्रक्रिया १००% सुरक्षित र सुरक्षित छ, र हामी तपाईंको गोपनीयतालाई सम्मान गर्दछौं। हामीले पहिले नै १००,००० भन्दा बढी व्यवसायहरूलाई उनीहरूको Google Ads रणनीति र उत्कृष्ट नतीजोको साथ प्रदर्शन प्रदर्शन गर्न मद्दत गरिसकेका छौं।
हामीले केहि गाह्रो र समय खपत हुने केहिलाई छिटो, सजिलो, केहीमा परिवर्तन गरेका छौँ र हामीलाई रमाईलो भन्न हिम्मत गर्दछौं। तपाईं सुझावहरूको साथ "खेल्न" सक्षम हुनुहुनेछ जस्तो कि यो एक खेल हो, ताकि तपाईं अधिकतम स्कोरमा पुग्न सक्नुहुनेछ - र आरओआई - तपाईंले यो महसुस गर्नुभन्दा पहिले। सबै जबकि तपाईं प्रक्रिया मा एक बुद्धिमान र अधिक अनुभवी व्यापार प्रबन्धक बन्न अधिक जान्न। Clever Ads साथ, तपाईलाई जहिले Clever Ads थाहा हुन्छ कि तपाईले के गर्नु पर्ने हुन्छ तपाईले तपाईको अर्को चरणहरुमा मद्दतको लागि हामीमा भर पर्न सक्नुहुन्छ।
हाम्रो दृष्टिकोण यो हो कि कुनै पनि आकार र बजेटको कुनै पनि व्यवसायको गुगलमा विज्ञापन गर्न पहुँच हुनुपर्दछ। त्यसकारण हामीले साना व्यवसायका लागि यो नि: शुल्क Google Ads Audit विकास गर्‍यौं ताकि उनीहरू ठूला खेलाडीहरूको बिरूद्ध बराबरी सर्तमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन्। यसको कारणले तपाईले आफ्ना अभियानहरूको अडिट गर्नु पर्दैन: तपाईलाई शंका छ कि तपाईको गुगल विज्ञापन अभियान अझ राम्रो गरीरहेको छ कि भनेर जाँच गर्न चाहानुहुन्छ, वा तपाईको मार्केटिंग एजेन्सीले वास्तवमै यसको उत्तम काम गरिरहेको छ कि भनेर जाँच गर्न चाहानुहुन्छ, वा हुनसक्छ तपाई केवल उत्सुक हुनुहुन्छ। को बारे मा यदि तपाइँको कडा परिश्रम भुक्तानी गरिरहेको छ, Clever Ads तपाइँको उपकरण हो।
साथै, विशेषज्ञहरु हाम्रो टोली सधैं तपाईंलाई मदत गर्न तयार छ, र तपाईं सधैं कुनै पनि प्रश्न, चिन्ता, सुझाव तिनीहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, वा सहायताको तपाईं मा आवश्यक हुन सक्छhi@cleverads.com
उपकरण को एकीकृत सुइट
Clever Ads लेखा परीक्षण प्रयोग गरेर अर्को लाभ यो हो कि तपाईं Clever Ads ड्यासबोर्डमा अन्य धेरै उत्पादनहरू पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसैले तपाईं Google Ads Audit पावरलाई अन्य उपकरणहरूसँग मिलाउन सक्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई स्वचालित रूपमा नयाँ गुगल विज्ञापन अभियान प्रकारहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ, नयाँ ब्यानरहरू उत्पन्न गर्न तपाईंको लागि व्यापार, वा नयाँ चीज खोज्नुहोस् अन्य चीजहरूका बीच। हाम्रो विज्ञापन Google विज्ञापन उपकरण को सबै मा गर्न को लागी सबै काम गर्न को लागी तैयार छ जब तपाइँ आफ्नो समय को लागी लगानी गर्नुहुन्छ जब तपाइँ राम्रो हुनुहुन्छ, चलिरहेको छ र तपाइँको व्यापार को प्रबन्धन मा।
हामी तपाईंको डाटा सुरक्षा ख्याल। जाँच हाम्रोगोपनीयता नीति.
हामी तपाईको Google Ads खातामा यसलाई विश्लेषण गर्नका लागि साइन इन गर्न आग्रह गर्नेछौं र यसलाई अडिट गर्नेछौं ताकि हामी तपाईको अभियानबाट अधिक पाउनको लागि निजीकृत सुझावहरू प्रदान गर्न सक्दछौं। हामी डाटा गोपनीयतालाई गम्भीर रूपमा लिन्छौं र केवल तपाईंलाई सकेसम्म उत्तम अनुभव प्रदान गर्न हामी चाहिएको चीजहरू संकलन गर्दछौं।